Maalinta: Juun 7, 2019
Samsun-Kalin Railway Line ayaa saxiixay
Dalabaad aad u ballaaran ayaa la sameeyey oo la xidhiidha khadka tareenka Samsun-Kalin, oo furitaankiisa dib loo dhigay mudo badan. Khadka, shil tareen ee Ankara ayaa la dhigay qorshe lagu sheegay inuu la'yahay calaamadeyn la'aanta Shukri Habergazetesi'nden [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli ee Kabaoğlu oo ku taal degmada Izmit by Prof.Dr. Wadada lugta ee laga dhisayo Baki Komsuoğlu Street waa soosaarista xoojinta birta. Dhismaha TÜRGEV ​​iyo degmadu waxay ku taal wadada laamiga ah [More ...]
Mid ka mid ah laxiriira Degmooyinka Magaalada Kocaeli, GaadiidkaPark A.Ş. Khadadka 800K iyo 800C, oo loo agaasimey sanadkasta xagaaga 15, waxay bilaabi doonaan howgallada bisha Juun 2019 kadib baahi weyn. Xeebaha Calanka Buluugga ah ee Kandira [More ...]
İGA, oo fulisay dhismaha garoonka diyaaradaha ee Istanbul iyo hawlgalkii 25 ee sanadka, ayaa ogolaaday in ay saamiyo ka iibiso shirkadda latalinta Mareykanka ee Lazard si ay u iibiso saamiyada. Dhismaha Madaarka Istanbul iyo sanadka 25 [More ...]
Maanta oo ku taal Taariikhda 7 Juun 1857 Qandaraaskii ugu horreeyay ee qadka Constanta-Chernovada ayaa la diyaariyay. 7 Juun 1931 Marka loo eego warka 'Hakimiyet-i Milliye', ma jirin wax dalag ah oo gacanta ugu jiray beeraleyda halkaas oo jidadka tareenka ee laga dhisay bariga Ankara gudbaan. this [More ...]